SAZY FANAMELOHANA HO FATY : Tsy vitsy ireo Malagasy mbola mankasitraka izany
Raha eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena dia efa tena maro ireo firenena mitsipaka ny sazy fanamelohana ho faty. 12 octobre 2017
Anisany antony mahatonga izany ny fanajana ny zon’olombelona izay hindraindraina tokoa amin’izao vanim-potoana izao.
Madagasikara ihany koa dia anisan’ireo efa manana lalàna manafoana izany fanamelohana ho faty izany ho an’ny fitsarana eto an-toerana, dia ny lalàna 2014 – 035 tamin’ny 09 Janoary 2015 izany. Fa efa nisy ihany koa ny fankatoavana ny fifanekena iraisam-pirenena mikasika izany izay nataon’i Madagasikara, ny desambra 2016. Ankehitriny anefa, indrindra tao anatin’ny herintaona teo eo dia hita fa tena mbola mahazo vahana ny sazy fanamelohana ho faty eto Madagasikara.
Miseho sesilany izany amin’ny alalan’ireo endrika fitsaram-bahoaka isan-karazany misy, na eto an-drenivohitra na any amin’ny faritra. Izany no niseho dia vokatry ny tsy fipetrahan’ny fifampitokisana intsony, indrindra eo amin’ireo rafitra mpanasazy, araka ny fanadihadiana.
Mifandraika amin’izay indrindra dia ny 10 Oktobra lasa teo no nankalazaina ny andro iraisam-pirenena hiadiana amin’ny sazy fanamelohana ho faty.
Nankalaza izany ihany koa i Madagasikara ka nisy ny atrikasa izay notanterahana, entina hikaroham-bahaolana mikasika izany tranga izany.
Anisany nandray anjara tamin’izany ireo fiarahamonim-pirenena avy eto an-toerana, niaraka tamin’ireo mpiara-miombon’antoka samihafa. Fotoana indrindra io nijerena ny fomba hampiharana ireo lalàna efa neken’i Madagasikara ary handresen-dahatra ireo vahoaka eny ifotony.
Heverina araka izany fa hametraka paikady fanentanana ny vahoaka rehetra ireo fiarahamonim-pirenena mba hanafoanana tanteraka ity sazy fanamelohana ho faty ity.
Ny herisetra no miteraka herisetra
Mbola misy ireo Malagasy sasantsasany no mihevitra fa vahaolana tena mahomby ny fitsaram-bahoaka, hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra tao amin’ny atrikasa. Etsy ankilany dia misy ihany koa ireo faritra sasany izay mbola mandala ny fanesorana ny aina amin’ny alalan’ireo dina isan-karazany hifanarahana any an-toerana.
Ankoatra ireo dia mbola misy ihany koa ireo tompon’andraikitry ny filaminana sasany rehefa manao ny asany dia tonga hatramin’ny famonoana, izay voalaza fa mba ho fitandroana ny filaminana. Ny tena tsara ho fantatra anefa dia ny herisetra ihany no miteraka herisetra. Izay fomba fanao izay no lasa mitohy sy mahazo laka, hany ka lasa sarotra ny hamehezana ny resaka fanamelohana ho faty. Notsindriana nandritra ny fanazavana fa ny aina no zo lehibe indrindra amin’ny zo rehetra.